Tag: b2b ọdịnaya | Martech Zone
Tag: b2b ọdịnaya
Ndi otu Economist emeela nyocha nke oma na nyocha banyere omume B2B wee meputa ihe omuma a na nsonaazụ ya. Na ajụjụ ọ bụla, enwere ndị ahịa azụmaahịa na ọgbọ na-esote ndị na-azụ ahịa. Ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịhụ ọdịiche dị ukwuu n’etiti ha abụọ. Na nyochaa ọdịiche ahụ, enwere ụfọdụ esemokwu na-adọrọ adọrọ Ndị na-ahụ maka azụmaahịa na-achọta akụkọ nyocha na-enye aka site n'aka onye 35% buru ibu! Ndị na-azụ ahịa azụmaahịa, site na 26%, na-emefu ma ọ dịkarịa ala anọ
Mgbe anyị na-agwa ụlọ ọrụ na-ejere ndị ahịa ozi, ha na-ajụ mgbe niile ma anyị na ụlọ ọrụ B2C ọ bụla arụ ọrụ. Mgbe anyị na ụlọ ọrụ B2B na-ekwu okwu, ha na-ajụ ma anyị esorola ụlọ ọrụ B2B rụọ ọrụ. N'ihe niile n'eziokwu, atụmatụ dị nnọọ yiri… ọ bụ ha ọnụọgụ na usoro ịzụrụ ihe dị iche. Agbanyeghị, anyị na-ahụ ọdịiche dị na uru maka nzụta. Companieslọ ọrụ B2C na-adaberekarị na nnukwu mpịakọta na obere ego maka ịzụrụ
Izu a Ana m arụ ọrụ na ihe ngosi maka ogbako Webtrends. Isiokwu m akọwapụtara nke ọma na oghere oge dị mkpirikpi (nkeji 10), yabụ ọ na-ama m aka ịme otu ihe ngosi! Agwara m ka m gwa B2B ịde blọgụ nke ọma. Emechaala m igodo nke azụmahịa maka ịde blọgụ ruo 5 usoro dị iche iche maka ngosi: Nọ n'ihu. O zughi oke blọgụ, ị gharịrị ibanye